Sobika: Inona no antony hifohanareo rongony
Tanora: Sady manome hery izy ity no fialam-boly ihany koa.
S: Fa inona no asanareo no ilana hery?
T: Tsy manana asa izahay fa manaraka ireny kamio ireny, ka raha mety ny atao dia manao dokera mampidina entana.
S: Entana inona no tena ampidininareo
T: Atao daholo izay misy, na biriky, na fasika, na vato, na sira, na siramamy, na fripperie.
S: Ahoana no ahazoana ilay asa?
T: Io razoky samy misy jiolahim-boto daholo ny tanàna eto Antananarivo, fa tsy misy mifapitsabaka, ny eny Tanjombato, dia eny izy no mampidina, ny eny Andravoangy tsy mandeha eny Isotry, dia arak'izay.
S: Inona no anton'izay? Samy manana ny taniny izany?
T: Izay mihitsy, ny patron koa efa mahalala fa raha bandy avy any an-toerakafa no alainy, dia gafian'ny bandy eo an-tanàna izy dia mifitsaka.
S: Dia ohatrinona ny karama?
T: Bandy 7 lahy eo no mampidina semi iray (Camion Semi-remorque), dia samy mahazo 15 000 ariary eo isan'olona.
S: Adiny firy no mampidina semi iray?
T: Arakaraky ny entana sy ny toerana ampidirana azy, eny Andravoangy izao mbola entina elakelatrano dia somary lavitra, ny eny Tanjombato tonga dia eo antokotany no ampidinina, fa amin'ny ankapobeny adiny 5 eo no andravana semi iray.
S: Inona no tena entana sarotra atao?
T: Ny sira no tena henjana.
S: Fa maninona?
T: Ny tena efa tsemboka, nefa ny sira asidra be, dia manaikitra lamosina sy tanana, maraina ny andro tsy maharay sorà (sigara) intsony ny tànana.
S: Misy entana mavesatra ve ka tsy zakan'ny dokera iray ny entana ampidinina, ary mampiakatra entana koa ve ianareo?
S: Fa ahoana?
T: Razoky sao mitabataba ko
S: Lazao fa tsy miteny ny momba anareo aho e.
T: Misy entana mavesabe akarinay, izahay tsy mahafantatra izay ao anatiny, ary tsy misy bandy manamboatra ilay entana, fa ry zareo Patron ihany no manamboatra ilay entana, bandy efa 5 lahy vao mahazaka azy, ary semi iray, entana 4 fotsiny no hitondrana azy any Toamasina alefa sambo, na misy entina eny Ivato.
S: Inona no heverinareo fa ao anatiny?
T: zavatra mafy izy, ka mety vato na volamena, fa 'zahay mampakatra azy anaty kamio fotsiny.
S: Aleo atao mahitsy ary ny resaka, mangalatra ve ianareo?
T: Raha entana tsy vaky dia tsy maka izahay, fa raha misy vaky kosa ny gony na ny baoritra dia maka izahay.
S: Dia fanahinianareo azera ve mba ho vaky sitrany ahay misy akana.
T: Tsy manao an'izany izahay satria raha be loatra ny vaky dia tsy alain'ny patron miasa intsony.
S: Ary manendaka ve ianareo eny amin'ny elakelatrano ireny.
T: Marina aloha fa mifoka môly izahay satria tsy ho vita ny asa raha tsy midotra kely, satria ny gony iray bataina dia misy milanja hatramin'ny 120kg, nefa 40 tonnes no azeran'ny bandy 7 lahy indray alina, misy aza mampidina kamio roa indray andro.
Mafy izany ity asa ity, nefa ny manendaka faran'izay mora ary tonga dia vola be satria phone iray raha misy sanjila (chance) dia efa azo alefa roa alina (20 000 ariary).
Nefa matoa izahay mamono tena manao ity asana dokera ity dia tsy te angalatra izahay.
S: Ka iza izany no misam (sintomahery sy mangaropaosy)
T: Bandy hafa mamantam-bonina ireny, tsy te hisahirana, dia manendaka.
S: Aiza no ahazoany basy sy fitaovam-piadiana?
T: Mandoha ecolage amin'ny polisy na miaramila ireny, ny maimbo vava (Basy) no tena lafo ny fanofana azy.
S: Ohatrinona ny hofan'ny kalaky?
T: Tsy dia aiko loatra ny kalaky, fa ny PA (Pistolet automatique) tsy latsaka ny iray hetsy, ny indray alina.
S: Ary aiza no ahitanareo rongony?
T: Efa misy mpivarotra mpamatsy io.
S: Ohatrinona no mahazo.
T: Misy karazany fa raha itony fonosana itony 500 ariary da efa mahazo.
S: Firy taona ianao no nanomboka nifoka rongony?
T: 16 taona, izaho izao 27 taona.
S: Naninona no nifoka voalohany?
T: Niala fianarana, tsy afaka BEPC, ny ray amandreny mahantra tsy afaka nanohy fianarana intsony, dia niaraka samy bandy teo an-tanàna dia nanandrana, sady fialam-boly, dia nitady asa fa tsy nahita, dia nanao dokera nanampy nefa kely aina na dia nikotrana aza, fa rehefa manamôly dia mitombo hery.
S: Mikasa ny hiala dokera ve ary hijanona ny tsy hanamôly?
T: Raha mahita asa aloha dia miala amin'ity asa iray ity, fa ny môly betsaka ny bandy te hiala fa to vizana (maty) daholo avy eo.
S: Tsy matahotra ho tratran'ny polisy ve ianareo manamôly?
T: Koa ry zalahy aza misy mamatsy ka efa samy bizina io dia samy manao izay mahamety azy an.
S: Manambady amanjanaka ve?
T: Manambady, iray ny zanako.
S: Fantatry ny vadinao ve hoe manamôly ianao?
T: Mety fantany fa tsy miteny izy rehefa miditra ny vola.
S: Inona no hetahetanao? Na ny andrasanao amin'ny Fanjakana?
T: Rafanja moa ve inona no vitany aminay eo, ny azy efa milamina tsy mahita ny majinika izany izy, fa ny ahy ny faniriako dia ny hividy taxi dia mba miasa milamina fa ity dokera ity asa mahafaty.
S: Misaotra anareo nitafatafa taminay e.
T: Ianao no isaorana razoky mitondra ny hetahetanay, fa mametraha kely ary e, hihihi.
jeudi, 07 septembre 2017 17:53
mercredi, 06 septembre 2017 02:20
dimanche, 03 septembre 2017 01:50